Nandramone Decanoate (DECA) vovoka Fambolena sy mpanome - orinasa
Rano Nandrolone Decanoate (DECA) vovoka (360-70-3)
Ny perlaate de rose Nandrolone Decanoate (DECA), fantatra amin'ny anarana hoe 19-nortestosterone, dia endroogne sy anabolic steroid (AAS) izay ampiasaina amin'ny endrika esters toy ny nandrolone decanoate (marika Deca-Durabolin) sy nandrolonephenylpropionate (marika Durabolin) .
Rano Nandrolone Decanoate (DECA) vovoka (360-70-3) video
Rano Nandrolone Decanoate (DECA) vovoka (360-70-3) Description
Ny vovo-dronono Nandrolone Decanoate dia tsy isalasalan'ny faharoa-tsara indrindra fantatra amin'ny steroid aniriana taorian'ny Testosterone. Io fitambarana anabolika io dia nomena ny iray amin'ireo zava-mahadomelina tsara indrindra ho an'ny fihinana henan'aretina mena sy ny fientanentanana. Ny steroid anabolic anabolico izay nahazo fankasitrahana lehibe teo amin'ny mpahay bakteria sy ny atleta.
Natomboka tamin'ny fomba nentim-paharazana ho an'ny olona voan'ny aretin-kozatra ny aretin-kozatra, ny vovobony Rano Nandrolone Decanoate (DECA) dia afaka manatsara ny fitomboan'ny taolana sy ny fitomboan'ny hozatra. Ny fampiasana an'io steroid io mandritra ny enim-bolana ka hatramin'ny valo herinandro dia mifandray amin'ny fitomboan'ny famokarana sela mena sy ny fihanaky ny olana samihafa atrehin'ny atleta sasany mandritra ny fiasana mafy. Ity steroid ity dia ampiasaina amin'ny ankapobeny na ny taham-pahasalamana ary iray amin'ireo sertôsida vitsivitsy izay azo ampiasaina amin'ny fahavaratra sy alohan'ny fifaninanana matihanina.
Rano Nandrolone Decanoate (DECA) Specifications
Product Name Rano Nandrolone Decanoate (DECA)
Anarana simika Nandrolone decylate;19-Nortestosterone 17β-decanoate; 4-ESTREN-17BETA-OL-3-ONE 17-DECANOATE;4-ESTREN-17-BETA-OL-3-ONE DECANOATE;19-NORTESTOSTERONE 17-DECANOATE;19-NORTESTOSTERONE DECANOATE;17BETA-HYDROXY-19-NOR-4-ANDROSTEN-3-ONE 17-DECANOATE
Brand Name Deca-Durabolin
molekiolan'ny Formula C28H44O3
molekiolan'ny Wvalo 428.65
mitsonika Point 33-37 ° C
Tavy 483.46 ° C (tombanana)
Ny antsasaky ny biolojia manodidina ny 12 andro
Color Fotsy hoditra mavo mena
Application Nandritra ny fivoahana ho an'ny olona voan'ny aretina azo avy amin'ny hozatra, ny Nandrolone Decanoate dia afaka manatsara ny fitomboan'ny taova sy ny fitomboan'ny hozatra ary ny fanatsarana ny proteinina, ny fihazonana azota, ny fahombiazana ary ny fiaretana.
Inona no vovo-dronono Nandrolone Decanoate (DECA) (360-70-3)?
Ny fototra nandrolone dia matetika ampiasaina amin'ny testosteron lahy hormone reprostone. Afaka manampy amin'ny fanorenana indray ny vatan'ny vatan'ny olona, ​​hampitombo ny vatana sy ny taolana ary hamporisika ny fananganana tohatra mena. Azo atao koa ny mampitombo ny fihenam-bolo, ny fanentanana hohanina ary ny fampitomboana ny famokarana sela mena sy ny hamaroan'ny taolana. Ny fandinihana ara-pahasalamana dia nampiseho fa mahomby amin'ny fitondrana ny anemia, ny osteoporose ary ny endrika neoplasia sasany, anisan'izany ny homamiadan'ny nono, ary koa ny fanaovana fanabeazana afera. Ny Nandrolone dia matetika no mivarotra ara-barotra amin'ny endriny dekanoate (Deca-Durabolin) ary tsy dia mahazatra loatra amin'ny endriny phenylpropionate (Durabolin).
Ahoana ny fanondranana vovoanton'ny Nandrolone Decanoate (DECA) (360-70-3) asa
Ny volo-menamena nandrolone dia steroid anabolic. Izy io dia miasa amin'ny fampitomboana ny fitomboan'ny vatan'ny vatana sasany ary naseho ny fanatsarana ny fahaiza-mitondra oxygène amin'ny alalan'ny fitomboan'ny hemoglobinina sy ny haben'ny rà mena.
Rano Nandrolone Decanoate (DECA) vovoka (360-70-3) fampiasana
Nandrolone koa dia nampiasaina mba hanasitranana ny osteoporose amin'ny vehivavy, araka ny filazan'ny dokotera mpitsabo matihanina Doctor's Guide. Ny Nandrolone dia manatsara ny fiasan'ny collagène ao amin'ny vatana ary mamerina ny fandanjana ny vatan'ny calcium amin'ny fanamafisana ny mineraly. Nandrolone koa dia nampiasaina mba hanasitranana kanseran'ny nono ary hanamaivanana ny soritr'aretin'ny SIDA, araka ny tranonkala Wiley InterScience. Izany dia manampy amin'ny fisorohana ny fandaniana ny vatana ary ny tanjaka ara-batana izay matetika mampijaly ny mararin'ny SIDA.
Rano Nandrolone Decanoate (DECA) vovoka (360-70-3) soa
Ny Nandrolone dia mahomby amin'ny fampitomboana ny tanjaky ny hozatra sy ny hafanana. Izany dia manao izany amin'ny fanampiana ny vatana hampiasa ny proteinina voatsindrona kokoa amin'ny fomba mahomby kokoa. Ny vokatr'izy ireo dia matetika no mihelina ary ny sakafo tena avo lenta amin'ny proteinina dia ilaina mba hananganana tonon-kira ampy tsara. Ny nandrolone dia afaka mampihena ny fotoana fanarenana amin'ny fahavoazana sy ny fitomboan'ny fahavitrihana amin'ny alalan'ny fampihenana ny reraka aorian'ny fampiharana. Izany dia manao izany amin'ny fampitomboana ny fihenan'ny glycogen ho an'ny muscle taorian'ny fitondrana henjana. Mety midika izany fa afaka mampiofana mandritra ny fotoana lava kokoa ny atleta nefa tsy reraka. Ny fampiasana ny Nandrolone dia tsy vitan'ny vokatra malaza eo amin'ny mpanao bakteria, fa miasa tsara koa amin'ny fitsaboana fahasalamana samihafa. Ny vokatra tsara amin'ny zava-mahadomelina dia ahitan'ny fitomboan'ny taova, ny fanentanana ho an'ny ati-doha ary ny famokarana sela mena sy ny hamaroan'ny taolana. Ny fandinihana ara-pahasalamana dia nampiseho fa mahomby amin'ny fitondrana ny anemia, ny osteoporose ary ny endrika neoplasia sasany, anisan'izany ny homamiadan'ny nono, ary koa ny fanaovana fanabeazana afera.
Buy Nandrolone Decanoate (DECA) vapor (360-70-3) avy amin'ny Buyaas.com
Nandrolone Decanoate Fampiasana, Cycle, Dosage, ary Shocking Results
Anabolic Therapy amin'ny fitsaboana maoderina, William N. Taylor. MD, pejy 75-120
Osteoporosis: Ny fanindrahindrana sy ny fitantanana, natontan'i RM Francis, pejy 101-130
Nandrolone propionate fitaovam-piadiana (7207-92-3)
Rano Nandrolone (Duraboline) vovoka (434-22-0)
Rano Mestanolone roitso (521-11-9)
Rano Nandrolone Phenylpropionate (NPP) vovoka (62-90-8)